Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha kooxda Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka Man City – Gool FM
(Madrid) 25 Feb 2020. Zinedine Zidane ayaa wuxuu ku dhawaaqay liiska xiddigaha kooxdiisa Real Madrid ee kaga qeyb galaya kulanka Manchester City ee tartanka UEFA Champions League.
Macalin Zinedine Zidane iyo wiilashiisa kooxda Real Madrid ayaa waxay habeen dambe ku soo dhaweyn doonaan naadiga Manchester City garoonka Santiago Bernabeu si ay u wada ciyaaraan kulanka lugta hore ee wareega 16-ka tartanka UEFA Champions League.
Zinedine Zidane ayaa liiskan ugu yeeray 19-ka ciyaaryahan ee kaga qeyb gali doonto kulanka Man City, balse waxaa liiskan kaga maqan sababa la xiriira dhaawac xiddiga reer Belgium ee Eden Hazard, sidoo kale waxaa ka maqan Marco Asensio.
Sidoo kale waxaa Liiska kooxda Real Madrid ka maqan dhowr xiddig ee kale Mariano Díaz, Brahim Díaz, Nacho, Rodrygo iyo James Rodríguez.
Waxaa liiskan lagu arkay oo markale dib ugu soo laabtay xiddiga khadka dhexe reer Weles ee Gareth Bale, kaasoo kooxda Real Madrid ka maqnaa kulankii ugu dambeeyay ay kula ciyaareen Levante horyaalka La Liga.
Haddaba halka hoose kaga boggo liiska xiddigaha kooxda Real Madrid uu ku dhawaaqay tababare Zinedine Zidane, kuwaasoo ka qeyb galaya kulanka Manchester City ee tartanka UEFA Champions League: